Jawaari: Baanka Dhexe lagama bixin karo lacag uusan Golaha Shacabku amrin – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa sheegay in laga bilaabo bisha soo socota ee April aan Baanka Dhexe ee Soomaaliya laga bixin Karin wax lacag ah oo aysan la socon guddiga maaliyadda baarlamaanka.
Gudoomiye Jawaari ayaa hadalkaan maanta ka sheegay kulan baarlamaanka loogu qeybinayey miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2014.
Prof. Jawaari ayaa sheegay inuu warqad u qorayo wasaaradda maaliyadda, uuna ku wargelanayo ineysan bixin lacag aysan amrin golaha shacabka Soomaaliya.
“Wax Alle iyo wixii hanti ah ama lacag ah ee ku jirta qasnadda dowladda waxaa iska leh shacabka, shacabkana waxaa ka wakiil ah baarlamaanka, golaha shacabkuna waxa uusan idmin lama bixin karo, sidaa daraadeed 1-da April wax lacag ah lagama bixin karo bankiga, Wasaarada Maaliyadda ayaan warqad u qoreynaa” ayuu yiri Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya.
Marar badan ayaa shaki la geliyaa sida loo maamulo dakhliga soo gala dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, oo dowladdu sheegto in lagu xareeyo Baanka Dhexe.